1. Qeexida Macluumaadka Shakhsiyeed
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan booqashadaada bogga iyo ilaha aad ka heshay. Cookie-ku wuxuu ururiyaa macluumaad kala duwan, sida cinwaanka IP-ga, nidaamka hawlgalka, iyo biraawsar loo adeegsado.
Waxay kuxirantahay bogagga la booqday, bogagga qaarkood waxay yeelan karaan foomam kaa soo uruuriya macluumaadka adiga kugu saabsan, sida magacaaga, lambarka lambarka boostada, cinwaanka E-maylka, iwm.
2. Siyaasadeena cookie
Kukiyada waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo khibradaada websaydhka iyadoo lagu saleynayo isdhexgalkii hore ee goobta. Cookie-ka ayaa la soo degsadaa oo lagu keydiyaa biraawsarka internetka markii degel la helo markii ugu horreysay. Kukiyada la keydiyey waxaa loo isticmaalaa booqashada xigta si kor loogu qaado daawashada websaydhka.
Cookie-ka waa la xannibi karaa ama la tirtiri karaa xaaladaha noocaas ah ee aadan ku raacsaneyn inaad haysato cookie. Si kastaba ha noqotee, adoo sidaas samaynaya, degelku ma shubi karo, ama shaqooyinka qaarkood ee degelku si sax ah uma shaqeyn karaan, sababtoo ah xannibaadda cookie-ka.
Xusuusin: Xilligan, Kukiyadaha loo isticmaalo degelkeenna midkoodna ma ururiyo macluumaadka loo adeegsan karo shaqsi ahaan laguugu aqoonsan karo.
Sida loo maareeyo loona tirtiro Kukiyada
Kukiyada waa la xannibi karaa ama la tirtiri karaa iyada oo loo marayo qalabka "Setup" (ama "Tool") dejimaha. Hal ikhtiyaar ayaa ah in la aqbalo ama la diido dhammaan Kukiyada. Xulashada labaad ayaa ah in laga aqbalo cookies-ka gaarka ah boggaga gaarka ah. Browser-ka ayaa loo dejin karaa si loo hagaajiyo si uu kuu ogeysiin karo markasta oo aad hesho cookie. Maareynta Kukiyada iyo habka loo tirtiro waxay ku kala duwan yihiin daalacayaal gaar ah. Dhamaan daalacashada way ku kala duwan yihiin waqtigan. Si loo hubiyo sida biraawsarkaagu u maareeyo cookies-ka, fadlan u isticmaal hawsha caawinta biraawsarkaaga.